Faallada Maanta Iyo Marsanews Oo Diirada Saaraysa Siyaasiyiinta Waddani Ee Ku Tiraaba Kalmada Isbadal-doon | Marsa News
Faallada Maanta Iyo Marsanews Oo Diirada Saaraysa Siyaasiyiinta Waddani Ee Ku Tiraaba Kalmada Isbadal-doon
Hargaisa:(Marsanews) Somaliland oo haatan jirtay mudo ka badan rubuc qarni, lehna Axsaab qaran oo ka kooban sadex xusbi oo kala ah Waddani, Ucid, Kulmiye, Oo iyagu ah axsaabta ka turjumaysa rabitaanka shacbiga somaliland maadaamo ay yihiin wakiiladii umada oo bulshadu badhba mid sadexda xusbi ku abtirsadaan.
Hadaba waxa markasta shacbiga reer somaliland ay intooda badan iswaydiiyaan siyaasiyiin wajiytaba adoodu bulshada ku bateen oo xukuumadihii hore ee hogaaminta talada dalka soo hayay ka mid ahaa oo badiba siyaasiyiintaasi ay intooda badani wasiiro soo noqdeen halka midh iyo laba ay xilibaano baarlamaanka ah ahaayeen oo maamulka iyo hogaamintooda intaba aanay ahayn mid umada ku cusub isla markaana shacbiga ugu tirsan yihiin Budhcad Hantiyeed.
Ka gayoomimayno hadaynu mid-mid isu nidhaa diirada saara balse waan isku wada qaadaynaa oo waxa ay idil ahaan ba ka sinaayeen ku tagrifalka hantida umada, isticmaalka awooda iyo xilka qaranka oo ay ku goodiyi jireen, hadii baadhis lagu sameeyana waxaabay noqonayaan hoygii musuq-maasuqa.
Aan hadaba iswaydiino bal suaasha odhanaysa isbadal-doonka ay iyagu yihiin ee ay umada u keenayaan waa mid nooceeya? Dabcan qofkasta oo dareenkiisu shaqaynayaa wuu garan karaa jawaabta suaasha in aanay waxba ka jirin isbadal ay keeni karaan balse ay ka tahay uun afgobaadsi iyo isticmaalka kalmada isbadal-doon oo afkooda u fududaatay waxse intaa uga hooseeya aanu jirin marka laga reebo shaqsi nacayb iyo hebel yaanu kursiga hogaaminta dalka fuulin agtiisa waxba inooma yaalane, waana taa ujeedadooda rasmiga ahi.
Waayo maaha siyaasiyiin leh curin iyo hal-abuur cusub oo ay wax ku badali karaan ee waa rag badiba siyaasada qiimaynteeda meesha ugu hoosaysa ka galaya hadii hal-beega cabirka la saaro.